Daawo Sawirada:- Gaari Laga Soo Buuxiyay Walxaha Qarxa oo Caawa Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho - Hablaha Media Network
Daawo Sawirada:- Gaari Laga Soo Buuxiyay Walxaha Qarxa oo Caawa Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho
HMN:- Waxaa caawa magaalada Muqdisho lagu qabtay gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, gaarigan ayaa lagu qabtay Degmada Xamar Weyne ee Gobolka Banaadir, iyadoo aanay jirin cid falkaasi loo soo qabtay.
Gaarigan oo la soo dhigay afaafka hore ee Dugsiga Hoose/Dhexe ee Xaawo Taako, ayaa waxaa si sahal ah gacanta ugu dhigay Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida Gobolka Banaadir.
Gaari Walxaha Qarxa oo Caawa Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho 3
Ciidamada Nabad Suggida, ayaa la wareegay gaarigaasi, xilli muddo 10 daqiiqo uun uu yaalay halkaasi, waxaana la soo sheegayaa in Nabad Suggidu ku daba joogtay gaarigaasi.
Maamulka Degmada Xamar Weyne ayaa warbaahinta u sheegay in raggii la socday gaarigaasi ay ka baxsadeen gacanta hay’adaha ammaanka.
Ciidamada Nabad Suggida oo isku gadaamay wadooyinka soo gala goobtii uu gaarigu yaalay, ayaa waxay ka dejiyeen gaarigaasi fuusto uu ku jiro jawaan lagu soo cabeeyay walxaha qarxa iyo birro.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir, C/fitaax Cumar Xalane oo isagana Saxaafadda kula hadlay halkaasi, ayaa sheegay in gaariga uu ahaa mid lagu daba joogay, markii ay xogtiisa heleen laamaha ammaanka.
Afhayeenka, ayaa sheegay in gaariga ay Shabaabku kaga taggeen inta u dhaxeyso Iskuulka Xaawo Taako iyo Saldhiga Booliska ee Afar Irdood, isagoo xusay in Ciidamada Nabad Suggida ay ku guuleysteen in qaraxyadii ay ka furaan gaarigaasi.